Raiisel wasaare Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah waqooyiga gobolka Tigray - Amjambo Africa
Raiisel wasaare Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah waqooyiga gobolka Tigray
4tii Nofeembar, Raiisel wasaare Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu amar ku bixiyay hawlgallo militari oo ka dhan ah waqooyiga Gobolka Tigray, oo xuduud la leh waddanka Ereteriya. Duqeymaha ay dowlada dhexe la beegsatay gantaalada iyo goobaha hubka culus lagu keydiyo ee kuyaala magaalada caasimada ah ee Mekelle ayaa muujineysa khilaaf xoogan oo mudo soo jiitamayay, kaasoo cabsi galinaya gudaha iyo dibada Ethiopia ee ah in khilaafku uu si dhaqso ah faraha uga baxo. cawaaqib xumoHornafrik.
Raiisel wasaare Abiy Ahmed wuxuu ku tilmaamay duqeymaha inay yihiin weeraro rogaal celis ah, oo uu ku dhaartay inuu sii wadi doono, kadib markii ciidanka Tigreega sumcad xumo ay ku weerareen ciidamada federaalka ee gobolka. Wargeyska The Telegraph ayaa qoray in ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan dowladda lagu daweynayo goobta dhaawacyadii qoryaha, halka kiisaska qatarta ah ay la soo carareen ambalaasyada xarumaha caafimaadka ee gobolka Gonder.
Dawladdu waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah Tigreega waxayna u codeeysay inay xayiraad ku sameyso maalgalinta federaalka ee gobolka. Si loola wareego xukunka loona sharciyeeyo hoggaanka hadda jira, xildhibaannada federaalka waxay ansixiyeen dhismaha dowlad kumeel gaar ah oo ka jirta Tigray.
Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF) iyo Abiy Ahmed waxay leeyihiin taariikh dheer. 1970-yadii, kooxda TPLF, oo ay weheliyaan jabhado kale oo hubaysan, ayaa si wada jir ah isugu soo uruuriyay inay ridaan xukunkii foosha xumaa ee Mengistu, oo ay aakhirkii xukunka ka tuureen 1990-yadii. Qayb ka mid ah, Jabhadda Xoreynta Dadka Eritrea (EPLF), ayaa markaa ku dhawaaqday madaxbannaanida Eritrea. Dhanka kale, Ciidanka Xoreynta Tigray ayaa la wareegay hoggaanka isbahaysigii hadhay, hoggaamiyahoodiina, Meres Zenawi, wuxuu noqday ra’iisul wasaare ee Itoobiya, jago uu hayay 20 sano. Intii ay xukunka haysay, dowladda uu hoggaamiyo Tigreega waxay dhinac iska dhigtay qoomiyadaha kale, kuwaasoo kiciyay qalalaase ka dhan ah dowladda, waxayna wadada u xaartay Abiy Ahmed, oo ah qowmiyadda Oromada, inuu xukunka la fuulo 2018.
Aljazeera waxay qortay in hogaamiyaasha gobolka Tigreega ay bilaabeen khilaaf kala dhaxeeyo xukuumada Abiy Ahmed isla markii uu noqday madaxweynaha. Waxay ku eedeeyeen inuu dhinac iska dhigay, halka uu saaxiib la ahaa hoggaanka Ereteriya, runtiina markii uu xukunka la wareegay, Raiisel wasaare Abiy wuxuu gacan bir ah ku qabtay hoggaamiyeyaasha musuqmaasuqa ee jagooyinka ugu sarreeya, kuwaas oo badankood ka soo jeeday Tigray. Tigray ayaa tuhunsan in tallaabada lagu hagaajinayo xiriirka u dhexeeya xukuumadda Abiy iyo Ereteriya ay tahay hab lagu xakameeyo. Kadib duqeymihii cirka ee ay dawladda federaalka ah, Tigray ayaa xidhay hawadeeda waxayna xidhay waddooyinka gala gobolka. Kooxda TPLF ayaa lawareegtay xaruntii militariga federaalka ee taliska waqooyi, ficilkaas oo uu raiisel wasaare Abiy Ahmed ugu yeeray ‘ka gudbida khad cas.’ , iyo khilaaf weyn oo kala dhexeeya Masar xagga wabiga Niil. Raiisel wasaare Abiy Ahmed ayaa la gudoonsiiyay abaalmarinta Nobel Peace Prize sanadka 2019 kadib dadaalkiisa ku aadan dhexdhexaadinta qalalaasaha ka taagan Suudaan, Koonfurta Suudaan, Jabuuti, Kenya iyo Soomaaliya Hadda awoodiisa amaanta ee xasilinta xiisadaha ayaa aad looga baahan yahay dalkiisa, qaaradda oo dhanna waxay isha ku haysaa inay arkaan waxa uu sameyn karo.
NextAFRIKA “SADDEXDII MUDDO” MAANIYA elections Doorashooyinkii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacay Guinea iyo Ivory Coast